FXCC မှစ. Forex Trading ၏အခြေအနေများ | Forex အကောင့် & ပလက်ဖောင်းအခြေအနေများ | ငွေကြေးလဲလှယ်ရေး
ပင်မစာမျက်နှာ / ထရေးဒင်း / accounts ကို / ထရေးဒင်းအခြေအနေများ
FXCC Forex Trading ၏အခြေအနေများ
အောင်မြင်သော Forex ကုန်သည်များတစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Forex ကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်အခြေအနေများအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှပွင့်လင်းပွင့်လင်း Forex ကုန်သွယ်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခေတ်မီ suite ကိုဆက်ကပ်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားကျွန်တော်တို့ရဲ့ XL, Standard နှင့်အဆင့်မြင့်အကောင့်အသစ်များ၏၏သော့ features တွေဖော်ပြထားပါတယ်။
အဓိက Feature ကို
Hedging Capability သင်သည်သင်၏ရာထူးစောငျရနျး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရှယ်ယာအဆိုပါ hedged ရာထူးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပိတ်ဖို့ရန်နိုင်တော့မည်ဖို့အနားသတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ကိုသတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။ အပြည့်အဝစောင်ရန်းကိုအကောင့်ထဲက Stop မှကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိကြပေ။ သင့်အကောင့်ရှယ်ယာ (ထိုကဲ့သို့သောသတင်းသို့မဟုတ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှုတ်ယူခြင်းအပေါ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပွားကဲ့သို့) မဆိုအကြောင်းပြချက်ကိုအောက်တွင်သုညအဆင့်ကိုရောက်ရှိသို့မဟုတ်ပါလျှင်, သင့်ပွင့်လင်းရာထူးအလိုအလျှောက်ပိတ်သိမ်းလိမ့်မည်။ FXCC ကြောင့်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့အနုတ်လက္ခဏာချိန်ခွင်လျှာရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်မှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် hedged ရာထူး၏အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ဖို့ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ဤသည်အလွန်သေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာနှင့်အတူခြံရာထူးကြီးတွေပမာဏကိုထိန်းသိမ်း Accounts ကိုအပေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အနိမ့်ငွေသွင်းငွေထုတ်အဆင့် 0.01 လော 0.01 လော 0.01 လော စွမ်းအင်နှင့်ညွှန်းကိန်းများအနိမ့်ဆုံးငွေပေးငွေယူပမာဏသည် ၀.၁ စာရေးဖြစ်သည်
Desk ဖြေရှင်းခြင်း အားလုံးအရောင်း (လမျးဖွောငျ့-မှတဆင့်-ထုတ်ယူခြင်း) STP သုံးပြီး Inter-ဘဏ်ဈေးကွက်ထဲမှာကွပ်မျက်ခံရနေကြတယ်
automated ထရေးဒင်း သငျသညျ MT4 အပေါ်မည်သည့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသုံးပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
margin ခေါ်ရန်အဆင့် 100% 100% 100% သင့်အကောင့် 100% တစ် Margin အဆင့်ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်သတိပေးပါလိမ့်မည်
အဆင့်အထဲကကိုရပ်တန့် 50% 50% 50% သင်၏အကောင့်သည် Margin Level သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် Stop Out Level နှင့်အထက်သို့မဟုတ်အောက်သို့ရောက်သောအခါ system သည်သင်၏ပွင့်လင်းသောရာထူးအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ သတိပြုရန်မှာ FXCC အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးရပ်တန့်သွားသည့်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်းများ MetaTrader4 MetaTrader4 MetaTrader4 FXCC တွင် Meta Trader4& FXCC မိုဘိုင်းထရေးဒင်း
ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ ၂၈ ငွေကြေးတန်ဖိုးရွှေ၊ ငွေ၊ အပြည့်အဝစာရင်း View ၂၈ ငွေကြေးတန်ဖိုးရွှေ၊ ငွေ၊ အပြည့်အဝစာရင်း View 200 + ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, အပြည့်အဝစာရင်း View မည်သည့်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သိုက်ငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR & GBP အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR & GBP အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR & GBP ငွေကြေးသည်သင်တို့အထဲ၌သင့်အကောင့် denominate စေခြင်းငှါ
re-Quotes အဘယ်သူမျှမအပေးအယူ Desk အဘယ်သူမျှမ Re-Quotes ဆိုလိုတယ်
စျေးနှုန်း format နဲ့5ဒဿမစျေးနှုန်း5ဒဿမစျေးနှုန်း5ဒဿမစျေးနှုန်း ဥပမာ: 0.12345
stop Levels 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Pip ဝေး Market ကနှုန်းကနေ 0.1 Pip, သင်ပြန့်ပွားအတွင်း Stop ပျောက်ဆုံးခြင်းအလို့ငှာနေရာနိုင် ie ။
အမြင့်နှင့်အနိမ့်နှုန်းများ လေလံနှုန်း လေလံနှုန်း လေလံနှုန်း အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေးသည်အမြဲတမ်းလေလံနှုန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် Sell အနေအထားတွင်ရှိနေလျှင်သင်၏ Stop Loss သည် MT4 Market Watch သို့မဟုတ် Chart ရှိ High Rate ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရနိုင်သည်။
နိမ့်ဆုံးအပ်ငွေ 100 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားငွေကြေးဒါမှမဟုတ် Equivalent ငွေပမာဏ
အနိမ့် Withdrawal 50 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 50 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 50 အမေရိကန်ဒေါ်လာ အားလုံးအကောင့်အမျိုးအစားများများအတွက်
သြဇာ 1: 1 - 1: 300 1: 1 - 1: 200 1: 1 - 1: 100 - ရွှေ & ငွေများ၏သြဇာ 1 ဖြစ်ပါသည်: အားလုံးအကောင့် 100 ။
ကော်မရှင် * ZERO FX: 0.75 တစ်ခြမ်း PIP
သတ္တု: $ 7.5 တစ်ခြမ်း FX: 0.4 တစ်ခြမ်း PIP
သတ္ထု။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန & Indicator: $4တစ်ခြမ်း မိတ်ဆက်အခကြေးငွေ XL Accounts ကိုအပေါ်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါ, တစ် 3rd ပါတီမိတ်ဆက် client များအတွက်သတိပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောကြေးလျှောက်ထားလျှင်, client ကိုကြိုတင်ပြုလုပ်အကောင့်ပေါ်မဆိုကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုဖွင့်ဖို့ FXCC အားဖြင့်အသိပေးပါလိမ့်မည်။
မှောက်သည် ယင်းကိုသွားရောက်ဖတ်ရှုပါ စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့စာမျက်နှာ အသေးစိတ်ကို။
စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေများသက်ဆိုင်ပါသည်
FXCC Forex Trading နာရီ
ကုန်သွယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအချိန်ဖြစ်ပါသည် 17 ထံမှ: 05 မှ 16: 55 နယူးယောက်အချိန် (EST) တနင်္ဂနွေကနေသောကြာနေ့မှ 00 ညီမျှဖြစ်သော: 05 မှ 23: 55 ဆာဗာအချိန်, တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မှ, ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th နှင့်ဇန်နဝါရီလ၏ 1st မှလွဲ. ။ နေ့အလင်းသိမ်းဆည်းခြင်းအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးနှင့် server ကိုအချိန်နယူးယောက်အချိန် (EST) အရချိန်ညှိနေသည်။